SDL (Nyore DirectMedia Layer) Inofambisa kuenda kuGit uye GitHub | Linux Vakapindwa muropa
SDL (Nyore DirectMedia Layer) Inofambisa kuenda kuGit uye GitHub
SDL Raibhurari Vanogadzira (Nyore DirectMedia Layer), inovavarira kufambisa kunyorwa kwemitambo uye mashandiro emultimedia, yakazivisa shanduko yeMercurial sosi yekudzora system uye injini yekutevera bug Bugzilla kuGit uye iyo GitHub chikuva.
Sekureva kwaRyan C. Gordon, mumwe wevatungamiriri veprojekiti, Mercurial ichiri chakanakisa sosi yekudzora sisitimu uye Git yaisa mhinduro dzinoverengeka dzakashata dzekuvaka, asi Munyika yemazuva ano Mercurial iri kuramba ichiraswa uye maturusi ese ekuvandudza uye mafashama ekufambisa anotarisana neGit.
Vazhinji vanogadzira vanoshanda neGit Uye kutora chikamu muMercurial-yakavakirwa mapurojekiti kunoda kudzidza chimwezve chishandiso.
Mushure mekutamira kuGit, vekare system backers vanogona kushandisa subset yeGit yekuraira kuita zvakafanana mabasa aMercurial, asi vamwe vese vanozogona kushandisa chishandiso chiri nyore kwavari.
Icho chikonzero chekusarudza iyo GitHub chikuva kujairana neichi sevhisi kune vazhinji vanogadzira uye kugona kubvisa mutoro wekuchengetedza server software.
Iko kusagadzikana kuchave kurasikirwa kwekutonga pamusoro pezvivakwa.a, sezvo GitHub iri yekunze sevhisi inodzorwa neyechitatu bato.
SDL yaimbotonga kuti zvivakwa zvese zvinofanirwa kunge zviri zveprojekti. Asi nekufamba kwenguva, chirongwa ichi chakamira kushandisa maseva acho chaiwo kuchinakidzwa nemaseva akabhadharwa kubva kuDigital Ocean, izvo zvakaita kuti zvisakwanise kunetseka nezvekuchengetedzwa kwemidziyo uye, kana paine matambudziko, kutangazve sevhisi kubva kopi yekuchengetedza mumwe mutengesi.
Mutengo yerusununguko rwakadai ndiko kwaive kudiwa kwekuzvimiririra kuchengetedza zvinhu zvechinyakare zvisina basa, uye pakanga pasina nguva yakakwana uye zviwanikwa zvekuitisa zvemazuva ano.
Semuenzaniso, Bugzilla yakangofanana zvakafanana nemakore makumi maviri apfuura uye ine gomo rezvinhu zvisina kugadziriswa uye zvinongedzo zvinokonzeresa musoro nguva dzese panogovaniswa kugoverwa. Wiki yeMercurial, runyorwa rwekutumira, uye webhu interface zvakare yakaramba iri yechinyakare.
Kugadziriswa kweese masisitimu aya kwaida basa remaoko rakawanda uye kwakamutsa kunetseka pamusoro pekuvapo kwekushomeka mukodhi yemapurojekiti akasiyiwa-akashandiswa anoshandiswa.
Sekureva kwaRyan, anoziva kuti kuenda kuGitHub kurasikirwa kwekudzora, kubiridzira, uye nhanho kure nemisimboti yeFree Software Foundation, asi haasisina simba rekunyora kodhi yeOpenGL yekutarisana nebasa re manejimendi. ehurongwa hwave kuda kuputika, inoramba ichishanda nekutenda kumateki etepi tepi neminamato.
GitHub inotsigirwa nechikwata chihombe chevanjiniya vakabhadharwa, uye kana nechimwe chikonzero Microsoft ikabvisa GitHub, izvi hazvizokanganisa SDL chete uye kuzova dambudziko repasirese renzvimbo yese yakavhurika sosi, iyo inogona kugadziriswa nekumwe kutama kuenda kusevhisi nyowani.
Kune avo vasingazive nezve raibhurari SDL, iwe unofanirwa kuziva kuti izvi, inopa zvishandiso senge Hardware inokasira 2D uye 3D giraidhi kuburitsa, yekugadzirisa yekuisa, yekuteerera kutamba, 3D kuburitsa kuburikidza OpenGL / OpenGL ES uye mamwe akawanda akafanana mabasa.
SDL inowirirana zviri pamutemo neWindows, Mac OS X, Linux, iOS uye Android, kunyangwe iine rutsigiro rwemamwe mapuratifomu akadai seQNX, pamwe nemamwe maratidziro uye masisitimu akadai seSega Dreamcast, GP32, GP2X, nezvimwe.
Nyore DirectMedia Layer yakanyorwa muC, inoshanda natively neC ++ uye zvinongedzo zvinowanikwa kune mimwe mitauro yakati wandei, kusanganisira C # uye Python, inogoverwa pasi pezlib rezinesi. Iri rezinesi rinokutendera iwe kushandisa SDL zvakasununguka mune chero software.
Kunyangwe yakarongedzwa muC, ine machira kune mimwe mitauro yekuronga senge C ++, Ada, C #, BASIC, Erlang, Lua, Java, Python, nezvimwe.
Finalmente kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve katsamba, unogona kutarisa kushambadzira kwekutanga Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SDL (Nyore DirectMedia Layer) Inofambisa kuenda kuGit uye GitHub
Yakaunzwa Tor 0.4.5 uye isingazivikanwe yekuzivisa system yeGitLab
Fuchsia OS iri kushanda parutsigiro rwekumhanyisa zvirongwa zvisina kugadziriswa zveLinux